ဂျိန်းသာသာနာ ထွန်းကားနေတာ သိကြပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » ဂျိန်းသာသာနာ ထွန်းကားနေတာ သိကြပါ။
ဂျိန်းသာသာနာ ထွန်းကားနေတာ သိကြပါ။
Posted by Kotrue on Jun 19, 2012 in Science & Religion | 18 comments
ဂျိန်းဒဿနဆိုတာ – မမွေးခင်ကပြုထားတဲ့ ကံတွေကြောင့် ဒီဘ၀ဖြစ်ရတယ်။
– ဒီဘ၀မှာပြုတဲ့ကံတွေကြောင့် သေပြီးရင် နောင်ဘ၀ဖြစ်မယ်။
– ပန်းတိုင်က အဲဒီကံတွေ ကုန်သွားအောင်၊ သေပြီးနောင်ဘ၀မဖြစ်အောင်
ယောဂအကျင့်တွေကျင့်ပြီး ကံတွေကိုပွန်းအောင် နောက်ဆုံး ကုန်သွားအောင် လုပ်တဲ့နည်းပဲ..။
ဂျိန်းတွေမှာ အဲဒီတုန်းက အခုခေတ်မြန်မာပြည်လိုပဲ တရားစခန်းရိပ်သာတွေရှိတယ်..။
ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ အရိယသစ္စာမဂ္ဂင် ၈ ပါးနည်းလမ်းလို မဟုတ်ဘဲ အချိန်ပေးပြီး စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ရတယ်..။
ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ တစ်နေ့မှာ ဂျိန်းတွေရဲ့တရားစခန်းရှိတဲ့ တောင်ခြေကိုကြွသွားတယ်..။
အဲဒါနဲ့ ဗုဒ္ဓက –
“ငါ့ရှင်တို့၊ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလိုအပင်ပန်းခံ ကျင့်နေတာလဲ”မေးတယ်..။
(ဒီနေရာမှာ ဖြတ်ပြောချင်တာက ဗုဒ္ဓရဲ့သဘောထားပဲ..။ ကိုယ်ကျင့်နေတာကို ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင့်သလဲ၊ ဘယ်လိုပန်းတိုင်ရှိသလဲ သိသင့်တယ်..။ အဲဒါတွေ စဉ်းစားနေတာ
တရားတက်ဖို့နှေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ သြ၀ါဒတွေဟာ ဗုဒ္ဓတပည့်တွေ မဖြစ်ထိုက်ဘူး..။)
အဲဒီမှာ ဂျိန်း (နိဂန္တ) တွေက – သူတို့ဆရာကြီး (ဂျိန်းဘုရား)က အလုံးစုံကိုသိတဲ့ သဗ္ဗညုတဖြစ်တယ်၊ ဆရာကြီးကပြောလို့ ရှေးဘ၀တွေကလုပ်ထားတဲ့ ကံတွေကုန်ပြီး နောင်ဘ၀မဖြစ်အောင်၊ သို့မဟုတ် ကံတွေကျန်ရင်လည်း
ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ ပြန်ဖြေတယ်..။
ဗုဒ္ဓက – “ဒါဆိုရင် မင်းတို့ကျင့်နေတာလည်း ကြာနေပြီ၊ ဆိုတော့ အရင်မမွေးခင်ဘ၀တွေက ကံတွေဘယ်လောက်ကုန်သွားပြီလဲ၊” မေးတယ်..။
အဲဒီမှာ ဂျိန်း (နိဂန္တ) တွေက – “မသိပါဘူး အရှင်ဂေါတမ” ပဲပြောရတော့တာပေါ့..။
နောက်ထပ်ပြီး “ကံတွေက နောက်ထပ် သေပြီး ဘယ်နှစ်ဘ၀လောက်အတွက် ကျန်သေးသလဲ“ဟု ဗုဒ္ဓက မေးတယ်။
နိဂန္တတွေက – “မသိပါဘူး အရှင်ဂေါတမ”လို့ ဖြေကြပါတယ်။
” ဒါဆိုရင် သင်တို့ကို ပြပေးနေတဲ့ ဂျိန်းဘုန်းကြီး ရိပ်သာဆရာတော်တွေကော သေပြီး မမွေးခင် ဘ၀တွေက ကံတွေ ဘယ်လောက်ကုန်သွားပြီ၊ သေပြီး ဘယ်နှစ်ဘ၀ကျန်သေလဲဆိုတာတွေ သိသလား” ဟု ဗုဒ္ဓက ထပ်မေးတော့
နိဂန္တတွေက – “ဒါလည်း သူတို့ မသိကြပါဘူး အရှင်ဂေါတမ”လို့ ဖြေကြပါတယ်။
နောက်ထပ် မေးခွန်းတွေကိုလဲ မသိဘူးလို့ချည်းဖြေတဲ့အတွက်
ဗုဒ္ဓက – “အသင်တို့တတွေဟာ မသိတဲ့သူတွေ လမ်းပြတဲ့ နောက်ကို အကန်းလမ်းလျှောက်သလို လိုက်နေကြတဲ့ အလွန်မိုက်မဲတဲ့ (stupid) သူတွေပဲ..” ဆိုပြီးရှုတ်ချပါတယ်။
(သေပြီးနောက်ဘ၀တွေ ချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက် အသေအလဲကျင့်နေကြသော အခုခေတ်ရိပ်သာစခန်းများ ဆင်ခြင်စရာ)
Ko true ရေ…
ကျွန်တော့ ကတော့ ယနေ့မြန်မာပြည်မှာ စခန်းသွင်းပြီး လူတွေကို သဘာဝ ခံစားချက်ဝေဒနာ ဖြစ်တဲ့ ထုံကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ခံစားချက်ကို ကြည့်ခိုင်း၊ ရုပ်နာမ် ဖြစ်ပျက်ကို ရှု့မှတ်ခိုင်း ပြီးတော့ ဒီဘ၀မှာ တရားရရင် နောက်ဘ၀ ဆိုတာ မရှိ ..ဒီဘ၀မှာတရား မရရင် နောက်ဘ၀ဆိုတာ ရှိဆိုတာ.. အခုဂျိန်းတွေ အားထုတ်တဲ့ ကံကိုကုန်အောင် အားထုတ်နိုင်ရင် ဒီဘ၀မှာ ကံလက်ကျန်မရှိတော့ဘူး..ကုန်အောင် အားမထုတ်နိုင်ရင် နောက်ဘ၀မှာ ကံကုန်အောင် ဆက်လက်အား ထုတ်တာဟာ စကားလုံးသာ ကွဲတာပါ …ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အဖြေကတော့…..
ယခုလက်ရှိမြန်မာပြည်ရှိ တရားစခန်း = ယခု အိန္ဒိယမှာ ရှိနေတဲ့ ဂျိန်း၏ တရားစခန်း ….
How stupid comment you are commenting, Ko out of….
Buddha become after ကျင့် . He never blame the ကျင့် .
Jainism = Every living being hasasoul.
May be jainism have the ကျင့်.
but jainism ကျင့် and busshism ကျင့် different like oil and water.
In buddha’ gohndaw9pars, there is one gohndaw ” waitzar sarana than pan naw “the lord, who the meaning is knowing the true and ကျင့်ing “.
i am sorry for my english and i don’t know how to type in myanmar language. somebody teach me how to write in myanmr language.” personally i don’t like zawgyi because of they don’t follow unicode standard. they use some spaces which are standard for tine yin thar languageS.
Mingalaba first last..
different like oil and water. ဆိုတာ ကို စဉ်းစားလို့ရအောင်…
ကျွန်တော်ထင်တာ ဂျိန်းကျင့်စဉ်နဲ့ ယနေ့ရိုးရာ ဗုဒဘာသာတွေရဲ့ ကျင့်စဉ် ဘာဖြစ်လို့ တူတယ်
လို့ပြောရလဲဆိုတာ ကံလက်ခံ ပုံခြင်းကလည်းတူ….တရားကျင့်တဲ့ အခါမှာလည်း အတိတ်ဘ၀က ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ အကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီး မမြင်ရတဲ့ အရင်ဘ၀က လုပ်ခဲ့တဲ့ကံကို ကြည့်ပြီး သုခပဋိပဒါ ပုဂိုလ်၊ ဒုက္ခပဋိပဒါပုဂိုလ်ဆိုပြီး
တရားအားထုတ်တဲ့အခါ တချို့များ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တဖြန်းဖြန်းနဲ့ ပြန်ရိုက်တာတို့၊ ဝေဒနာကို
အလူးအလှဲခံစား ရတာတို့ဆိုတာ အရင်ဘ၀က ၀ဋ်ကြွေးဆို ပြီး ဒီအကြွေးတွေကို အောင့်
အီးသီးခံလိုက် ဒါမှ နှင့် အကြွေးကြေမယ်..ဆိုတာတွေဟာ သဘောတရားခြင်း အတူတူပါ..
သီရိဓမ္မသောက မင်းလက်ထက် အမြင်မတူတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို နှင်ထုတ်တဲ့ အချိန်မှာ..
တချို့ဘုန်းကြီးတွေဟာ ဂျိန်းကျောင်းတွေမှာ ခိုးအောင်းရတယ်…
ထင်ဒါ..အဲဒီ အချိန်ကတည်းကများ ဂျိန်းအယူအဆတွေများ..ကူးဆက်လာ သလားပေါ့နော..
ဂျိန်းနဲ့တူတာ တင်မကပါဘူး.. ဟိနူ အယူအဆတွေ နဲ့လည်း အများကြီး ဆက်စပ်နေတာ တွေရတယ်..
ဥပမာ..ဟိနူတွေဟာ လူသေရင် အတ္တမာ လေးက လူ့ကိုယ်ခနာ ကိုယ်ကနေ ထွက်သွား
တယ်ဆိုတာ.. ဗုဒဘာသာတွေ လက်ခံတဲ့ စိတ်ဝိဥာည်သတ္တိနဲ့ သိပ်မကွာလှဘူး..
ဘုရားမပွင့်ခင် ဒီအယူအဆတွေကရှိနေပြီးသားဆိုတော… ဒီသဘောတရားပြန် မလွမ်းမိုးလာ
နိုင်ဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူး…
ဥပမာ ပေါင်းပင် ထူထပ်နေတဲ့ ခြံ တခြံကို ဘုရားကရှင်းပုံ ရှင်းနည်းပေးတော့ တချို့တော့ရှင်း
သွားပေမဲ့ ဘုရားပွင့်တဲ့ အချိန်ကလည်း အင်မတန်တိုတောင်းတယ် (၄၅)၀ါ ဘဲဆိုတော့.. ဒီခြံကို ပေါင်းပင်တွေ ပြန်မထနိုင်ဘူး လို့ မပြောနိုင်သလို…
ဒီဂျိန်းယဉ်ကျေးမှု၊ ဟိနူယဉ်ကျေးမှု ပေါင်းပင် ပြန်မလွမ်းမိုးနိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ?..
ကျုပ်ကတော့.. ဂျိန်းနဲ့စာရင်. ဟိန္ဒူသာသနာနဲ့ပိုနီးစပ်တယ်ထင်မိတယ်..
မြန်မာထေရ၀ါဒမှာ.. နတ်တွေ..ဘိုးတော်တွေ.. ဂမ္ဘီရတွေရောပါနေတဲ့အပြင်… အမဲသားမစားရဆိုတာကပါ.. သိသိသာသာ..တိုးဝင်နေတာကိုး..။
ဆရာဓမ္မာစရိယဦးဌေးလှိုင်နဲ့.. စကားပြောဖြစ်တုံးက.. သူပြော/ရေးတာမှာ.. ဟိန္ဒုပုရာမ်ကျမ်းတခုထဲပါတာက.. ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တယောက်က.. သူ့နောက်ကဆင်ရိုင်းလိုက်လာလို့.. ပြေးလာပြီး.. ရှေ့မှာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းရှိလို့.. ၀င်ပြေးလိုက်ရင်.. အသက်လွတ်မယ်ဆိုရင်တောင်.. ၀င်မပြေးပဲ.. အသက်အသေခံရမယ်ဆိုထားပါတယ်..တဲ့..။
ဒီခေတ်အခါမှာတော့.. ဟိန္ဒုဘုရားကျောင်းထဲ.. ဂေါတမဗုဒ္ဓဆင်းတုပါ.. ထုလုပ်ပူဇော်ပြီး.. သူတို့ရဲ့.. လူသားဘုရားအဖြစ်ပါထည့်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ကာ…
နောက်တခုက.. ၀ိပဿနာကို.. ကမ္ဘာကို..မိတ်ဆက်ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ခဲ့သူက… ဟိန္ဒူမျိုးရိုး.. ဟိန္ဒုကြီးတဖြစ်လဲ..ဦးဂိုအင်ဂါဖြစ်နေတော့ကာ…
နောက်တခုက.. အာသောကမင်းနောက်.. အိန္ဒိယတိုက်ငယ်က.. အင်ပါယာအကြိးဆုံးမင်းတွေဟာ.. အရှေ့တောင်အာရှလွမ်းမိုးခဲ့ပြီး…သူတို့တွေဟာ.. ဟိန္ဒူမင်းတွေဖြစ်တော့ကာ..
နောက်တခုက.. ပထမမြန်မာနိုင်ငံထောင်တဲ့.. ပုဂံခေတ်မှာ.. ဟိန္ဒုဘုရားကျောင်းရှိနေပြီး.. ကျန်တဲ့ပုထိုးတွေကလည်း.. ဟိန္ဒူပုထိုးတွေပုံစံဖြစ်နေတော့ကာ…
နောက်တခုက.. မဟာယာနဘုန်းကြီးဖြစ်ဟန်ရှိတဲ့.. အရည်းကြီးရဟန်းတွေကို.. ခေါင်းစဉ်ကွဲတတ်ပြီး… သိက္ခာချနှိမ်နင်းခဲ့တော့ကာ..
အင်းအိုင်.ခလှဲ့..လက်ဖွဲ့.. . ဥုံ..သြောင်းတွေလည်း.. ကြိုက်တာမို့.. လက်တွေ့လည်းလုပ်… ဒီဇိုင်းအသစ်စတစ်ကာဆွဲပြီး.. ကားမှာ..စတစ်ကာလုပ်.. ကပ်ဖို့လည်း.. လုပ်နေကြောင်း..
ဗုဒ္ဓရဲ့ ၀ါဒဟာ ကျင့်စဉ်ပါလို့လက်ခံပြီးမှ၊ ဆင်းရဲပင်ပမ်းကြီးလှတဲ့ ခန္ဓာဝန်ကို ထမ်းထားရတဲ့ “ငါ”ဆိုတဲ့ ၀ါဒီသမားတွေ က သံသရာပြတ်ရေး တလွဲပညတ်တွေကို ခ၀ါချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားစာရွတ်ယုံ၊ တရားထိုင်ယုံနဲ့တော့ ဒီရုပ်ခန္ဓာအပေါ်တပ်မက်မှုကို အမြစ်ဖြတ်နိုင်အုံးမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓက ဖန်တီးပြီးဟောခဲ့တဲ့တရား လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ သြကာသလောကကြီးရဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုကိုသာ၊ (၄၅)၀ါစလုံး သက်သေထူခဲ့ပါတယ်။
The triple gems of Jainism (“Right View, Right Knowledge and Right Conduct”) provide the way to this realisation. There is no supreme divine creator, owner, preserver, or destroyer. The universe is self-regulated, and every soul has the potential to achieve divine consciousness (siddha) through its own efforts.
Namokar Mantra is the fundamental prayer in Jainism and can be recited at any time of the day. Praying by reciting this mantra, the devotee bows in respect to liberated souls still in human form (arihants), fully liberated souls forever free from rebirth (siddhas), spiritual leaders (Acharyas), teachers, and all the monks and nuns. By saluting them saying “namo namaha”, Jains receive inspiration from them to follow their path to achieve true bliss and total freedom from the karmas binding their souls. In this main prayer, Jains do not ask for any favours or material benefits. This mantra serves asasimple gesture of deep respect toward beings that are more spiritually advanced. The mantra also reminds followers of the ultimate goal of reaching nirvana or moksha.
ဒီပိုစ့်ကတော့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို လုံးလုံးမတူတဲ့ ဂျိန်းဘာသာနဲ့ အတင်းကြီး ထပ်တူပြု စွပ်စွဲထားတာပေါ့..။
ပြဇတ် က ကြတယ် ပေါ့…။
မိုးပြာဂိုဏ်းသားတွေရဲ့ပြဿနာက ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုလဲ သွေးကြွေးဆပ်ချင်ဇောနဲ့ အတင်းကြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တယ်…
ဒါပေမယ့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့အကြောင်းကို ဘာမှလဲသေသေချာချာနားမလည်ဘူး…။
ဒီတော့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေရဲ့ တချို့ အချိုးမကျတာတွေကို အကုန်လုံးရဲ့အချိုးမကျမှု့အဖြစ် သိမ်းကြုံးအပြစ်ရှာမယ်..
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ပိဋကတ်သုံးပုံထဲက ကာလာမသုတ်လို့ခေါ်တဲ့
အတွေးအကြံများတဲ့ ယုံမှားသံသယများတဲ့ ကာလာမတိုင်းသားတွေကို သူတို့စရိုက်နဲ့လိုက်အောင်ကိုက်အောင် ဟောထားတဲ့
သုတ္တန်လေးတခုကိုပဲ ဆွဲထုတ်ပြီး (သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဘို့) ကိုယ်လိုရာဆွဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် မယ်…
ကျန်တဲ့ သုတ်သုံးကျမ်း၊ ၀ိနည်းငါးကျမ်း၊ အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရှိတဲ့ ပိဋကတ် သုံးပုံကိုတော့ ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းမယ်…
ကျုပ်တို့ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သိတဲ့ လက်ခံတဲ့ ဘုရားဆိုတာက သုတ်၊ ၀ိနည်း ၊ အဘိဓမ္မာတွေကို ဟောခဲ့တဲ့ ဘုရားပဲ…။ ကျုပ်တို့ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သိတဲ့ လက်ခံတဲ့ တရားဆိုတာက သုတ်၊ ၀ိနည်း ၊ အဘိဓမ္မာတွေပဲ။
ဘုရားဆိုတာ ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားရမယ်၊ ဘယ်တရားပဲဟောခဲ့ရမယ်၊ သီလဆိုတာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်သင့်တယ်၊ စသည်စသည်ဖြင့် – ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကူးပြီးပြောချင်တဲ့သူတွေဟာ-
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘုရားလုပ်ပြီး ကိုယ့်တရားပဲ ကိုယ့်နာမည်တပ်ပြီး ကိုယ်ဟောသင့်တယ်..။ ကိုယ့်အယူဝါဒကို ကိုယ်စိတ်ချရင် ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ဘာသာအသစ် တီထွင်သင့်တယ်…။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်သည်၊ မဖြစ်သည်တို့ကို မယူပါ။ (“သေပြီးနောက် အကြောင်း ဗုဒ္ဓဘုရား မဟောကြားခဲ့ပုံ” သုတ္တံတရားများ
ဂျိန်းသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်သည်ယူပြီး၊ ဂျိန်းနိဗ္ဗာန်သည် သေပြီးနောက် မဖြစ်ခြင်းကို ယူထားသည်။ (“ဂျိန်းကံ နှင့် ဗုဒ္ဓကံ” http://www.ariyathitsa.org/html/ebooks.html)
ဒါဆိုရင် အခု မြန်မာပြည် ရိပ်သာစခန်းများ၏ အကျင့်နှင့် ဒဿနများသည်
ဗုဒ္ဓ အကျင့်နှင့် ဒဿနလော၊
ကိုယ်တိုင် အဖြေထုတ်ကြည့်ပါ ဦးဦးပါလေရာ။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အခုခေတ်ရိပ်သာစခန်းများနှင့် တူညီနေမှုကို အ၀တ်မ၀တ်ခြင်း၊ အ၀တ်ဝတ်ခြင်းနဲ့ တိုင်းရမှာလား? (ဒါမှ မဟုတ်)
တရားဒဿန၊ အကျင့် တူ၊ မတူနဲ့ တိုင်းရမှာလား?
ယနေ့ရိပ်သာစခန်းတွေနဲ့ကတော့ အ၀တ်ဝတ်ခြင်း၊ မ၀တ်ခြင်းပဲကွာပါတယ်။ အကျင့်နဲ့ ဒဿနကတော့ ဂျိန်းနဲ့ အမွှာ (the same) လိုပါပဲ။
အမှန်တကယ် ပြောခွင့် အဲ ရေးခွင့် ရရင် . . .
ကျုပ်မလဲ ဒီသဂျီး မြှောက်ပေးတိုင်း သူများနဲ့မတူအောင်လိုက်တွေးရဒါ အတော်နေရာကျလာဘီ
ဒါ့ကြောင့် သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးတွေ မထွက်လာရင် မမန်းပါဘူး
သူ့အလိုတော်တိုင်းဘဲ သူများနဲ့မတူအောင် ပြန်တွေးပါမယ်
ပြဿနာလို့ဆိုရမလား ဒီအကြောင်းကို အုပ်စုခွဲကြည့်ပါမယ်
ခုကိစ္စဟာ မမြင်ဘူးတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဓမ္မ တရားတော်မြတ်တွေကို ငြင်းခုန်နေကြတယ်လို့
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကို ယုံကြည်ကြပါသလား။ ဒီနေရာမှာ ဓမ္မ ဟာသတ်သတ်ပါ
ဓမ္မ ပေါ်မှာ သဘောကွဲတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး ယုံကြည်သူနဲ့ မယုံကြည်သူကို အုပ်စု ခွဲဒါဘာ
ဗုဒ္ဓ ကိုယုံကြည်ပါတယ် ဓမ္မကိုငြင်းခုန်နေကြတာပါ ( ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ဟာ အမျိုးစပ်လို့ရသေးတယ် )
ဒီလောက်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့လို ဆြာ့ဆြာ ကြီးတွေ နားလည်ပါးလယ် ရှိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်
ခုဟာက ဘယ်သတ္တဝါက ဘုရားမယုံ နတ်မယုံတာလား ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်သူလား
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ပိဋကတ်တွေကို အခြေခံပြီးပြောနေကြတာ အုတ်ရောကျောက်ရောဖြစ်နေတယ်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မမြင်ဘူးတဲ့ ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်တယ် ဓမ္မမှာကွဲတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်
ခင်ဗျားတို့ဟာ ရပ်ကွက်လူဂျီးဝင်အရွေးခံနေဒဲ့လူဒေနဲ့ဒေါ့ အတော်တူဒါဘဲ
( ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်တယ် ဓမ္မကွဲတယ်။ မှားတဲ့သူသေရင် ဘာဖြစ်မှာလဲ )
ဒါဂဒေါ့ ပညာကုန်သုံးပြီး ကြပ်ပေးခြင်းသာဖြစ်ဘာဂျောင်း
ဗုဒ္ဓသာသာနာထဲကို ဂျိန်းအယူ ဒဿနတွေနဲ့ တရားအကျင့်တွေက အသောကခေတ်လောက်မှာ ၀င်ရောနှောလာတယ်လို့ သမိုင်းတချို့မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သေပြီးနောက်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ပရမတ်တရားအကျင့်တွေဟာ ယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလွှမ်းမိုးသွားပြီး
ဂျိန်းနဲ့ အ၀တ်မ၀တ်တာမှ လွဲ၍ ခွဲမရအောင်တူသွားတာဟာ အသောကရဲ့ လုပ်ချက်တွေပါပဲ။
(အသောကရဲ့ လုပ်ချက်များကို သီးသန့် ပိုစ့်တစ်ခု ရေးပါဦးမည်။)
အဲဒီ အကြောင်းတွေကို “သေပြီးနောက် ဖြစ်၊ မဖြစ်” myanmargazette.net/46317 မှာ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
ဂျိန်း တွေ ဂျုံး တွေ ဂျိုင်းတွေ ဘာတွေတော့ မသိဘူး…။
သစ္စာလေးပါး တရားကို အထူးသိမြင်တော်မူတဲ့ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားကိုပဲ အထူးကိုးကွယ် ပူဇော်မိတယ်။
တရားကို သိမှ ဘုရားကိုသိ၏။
ဂျိန်းတရားကို လိုက်စားမိနေရင် ဂျိန သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပဲ။
ဗုဒ္ဓတရားအစစ်ကိ်ု သိပြီး လိုက်စားမှ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပါ အသင် R Ga . . ။
ကျုပ်ကတော့ အခုလောလောဆယ် အလှူတွေမှာ လိုက်စားနေတယ်။
လိုက်ဦးမလား . . . ဘော်ဘော် ။